ipayipi lokuhlobisa ikhaya Abenzi | I-china ifektri yokuhlobisa ikhaya china abahlinzeki
ppr nano ipayipi elwa namagciwane
Ubukhulu: 1.8-4.9mm noma inkambiso
Okujwayelekile: DIN8077, DIN8078, ISO15874, ngokwezifiso
Ubude: 3m / 4m / Ngokwezifiso
Umbala: Ophuzi / Ohlaza okotshani
Ithempelesha Yokusebenza: -20℃~ + 120℃
Ingcindezi Ukusebenza: 1.25Mpa 1.6Mpa 2.0Mpa 2.5Mpa
I-ISO9001: 2000 / ISO14001: 2004
Impahla eluhlaza: I-SG-5 PVC Powder
ipayipi lokushisa eliphansi le-pe-rt
I-PE-RT Pipe ne-Fitting yenziwa ngokuya nge-CJ / T 175-2002, kusetshenziswa i-ethylene-octylene copolymer njengezinto ezibonakalayo eziyinhloko, ezihloselwe ukusetshenziswa kokumelana nokushisa okuphezulu. Impahla eluhlaza inesakhiwo esikhethekile samangqamuzana, okubandakanya i-polyethylene eqondile njengoba iketango lomgogodla kanye namagatsha alawulwayo, ukuze ipayipi le-PE-RT nokufakwa kube nokumelana nokucindezela okuhle kakhulu. Okwamanje, inezimo eziphakeme kakhulu, lapho-ke ingagotshwa kalula ngaphandle kokushintsha umumo. Iphinde isebenze kahle ekushiseni okuphansi. Kanye nezinzuzo zenhlanzeko, amalunga wokushisela ukushisa, ukuxhumana okuthembekile ngaphandle kokukhathazeka ngokuvuza, kuyindlela ekahle yamapayipi wokushisa phansi.
Ngokuvamile, ukumelana nomoya-mpilo kwepayipi lepulasitiki akulungile, ngakho-ke, uhlelo lwamapayipi ludinga ukusetshenziswa namapayipi athwala ukumelana nomoya-mpilo uma kudinga. I-Liansu PE-RT (ukumelana ne-oxygen) phansi
ipayipi lokushisa lisebenzisa amasethingi amathathu we-co-extrusion technique. Ipayipi ligcwele ungqimba lwenamathisela elishisayo elincibilikayo nongqimba lwe-EVOH (ukumelana nomoya-mpilo) ngokulinganayo ebusweni. Ukumbozwa kungakwazi
misa umoya-mpilo ungene kuye ukufudumeza kabusha uhlelo ngempumelelo, futhi unciphise ukugqwala kuma-equipments. Isithombe esingezansi yisakhiwo seLiansu PE-RT (ukumelana ne-oxygen) ipayipi lokushisa phansi, kanye nokugeleza komoya-mpilo komkhiqizo wethu kwanelisa izidingo zepayipi lokushisa lepulasitiki.